Egbula B2B (Email) Onye Ozi | Martech Zone
Ejikwala ozi B2B (Email)
Otu n’ime ndị ahịa anyị jụrụ taa ma ha kwesiri ịkwaga onye na-enye ọrụ email ọzọ nke ọrụ ha na-eji. Anyị jụrụ ihe kpatara ya wee kwuo na ha natara 11% ibiaghachi siri ike ọnụego na ozi ịntanetị ha zitere. Ha chere na sistemụ ahụ agbajiri n'ihi na ha ji aka ha kwenye na ụfọdụ adreesị ozi-e nke kwuru na enwere mgbagha siri ike bụ ndị nnata ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Na a nkịtị ndapụta, a ọnụego dị elu nwere ike bulie ụfọdụ nku anya. Ọbụlagodi n'okwu a, anyị na-agba onye ahịa a ume ka ọ gwa ndị otu anapụta ya n'aka ndị na-eweta ọrụ email ha. Agbanyeghị, nke a abụghị ụlọ ọrụ gị - nke a bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ngalaba B2B na adreesị email na ndepụta ndị debanyere aha ha abụghị nkezi Gmail ma ọ bụ ndị nnata ndị ọzọ. Ha bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-achịkwa ozi dị n'ime ha.
Na onye na-eweta ọrụ email na nke a nwere aha pụrụ iche maka ezi nnapụta. N'ihi ya, o doro anya na enwere nsogbu aha IP na onye na-ezipụ ya.
Ọnọdụ a dị iche na B2C email deliverability. N'ihi olu SPAM na-asọba na mgbanwe ozi ụlọ ọrụ, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngalaba IT nwere etinye ngwa ma ọ bụ ọrụ iji jụ SPAM. Usoro ndị ahịa na-adaberekarị na aha onye zitere ya, ozi ahụ na olu nke Junk Filter clicks iji chọpụta ma iziga email na folda junk ahụ ma ọ bụ na ọ gaghị eziga ya. Ma na mgbe ahụ, email adịghị bounced - ọ napụta ya… naanị na junk nchekwa. Usoro azụmahịa nwere ike ọ gaghị enwe folda junk ma ọ bụ na ha nwere ike ịwụnye ozi ịntanetị ma hapụ ha ka ha banye!
A ga-anapụta email B2C, mana enwere ike ịdaba na nchekwa nchekwa. Email B2B; Otú ọ dị, enwere ike ịjụ ya kpamkpam. Dabere na ọrụ ma ọ bụ ngwa ọrụ ha na-eji gbochie SPAM, yana ntọala ha ahaziri, enwere ike ịjụ ozi ịntanetị dabere na adreesị IP na onye zitere ya, enwere ike ịjụ ya maka ọdịnaya, ma ọ bụ enwere ike ịjụ ya nanị n'ihi na ọsọ na olu nke ozi ịntanetị na-anapụta si otu ziri ozi.
Na ọnọdụ B2C, anabatara email ahụ n'ụzọ anụ ahụ na nzaghachi nye onye zigara na natara email ahụ. Na ọnọdụ B2B, ụfọdụ sistemụ na-agbagha email kpamkpam ma nye koodu njehie ụgha nke a ibiaghachi siri ike.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ngwa ụlọ ọrụ B2B jụrụ email ahụ na koodu ibiaghachi siri ike weghachite na adreesị ozi-e adịghịdị adị (n'agbanyeghị na ọ nwere ike). Nke a, yana ntụgharị nke achọtara na azụmaahịa, nwere ike bulie ọnụọgụ ego siri ike nke mkpọsa B2B karịa oke mkpọsa B2C. Ndị ahịa a kapịrị ọnụ bụkwa onye ahịa teknụzụ - yabụ ndị nnata ha bụ nchekwa yana ndị nchekwa IT… ndị na-achọ ịhazi ntọala nchekwa ọ bụla.
Ná ngwụsị nke ụbọchị, na-eweta ọrụ Email na-adịghị agha ụgha… ha nanị na-akọ na koodu na e zitere azụ si nnata ozi ihe nkesa na-. Ọ bụ ezie na nnukwu ọrụ email nwere ike ịnwe nsogbu na aha IP ha (nke ị nwere ike iji 250ok nyochaa), na nke a, obere ndị anata aha nnata pụtara ka ọ bụ nsogbu m. Ozi anyị na ndị ahịa anyị:
Atala onye ozi ahụ ụta!
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eweta ọrụ email ma ọ bụ nnukwu onye na-ezipụ email ma chọọ nyochaa aha IP gị, dozie nsogbu mgbapụta, ma ọ bụ tụọ ntinye igbe igbe gị, hụ na ị gosipụtara 250ok'ikpo okwu. Anyị na ha bụ onye anyị na ha na-arụkọ ọrụ.
Tags: b2b ibiaghachi uduozi nnapụta emailibiaghachi siri ike
Chukwuemeka onyeka (@chukwunyere)
Mee 13, 2015 na 5: 13 PM
Kpamkpam nweta azịza gị nye onye ahịa gị, mana gịnị ka ị gwara ha ka ha mee?
Mee 13, 2015 na 8: 20 PM
Ndewo Dara! Nnukwu ajụjụ, m kwesịrị ịgụnye ya!
Mee ka ndị na-eweta ozi Email ha nyochaa na enweghị nsogbu ọ bụla na mgbapụta ma mezie ha ma ọ bụrụ na e nwere.
Kpọtụrụ ndị ahịa nwere adreesị ozi-e dị mma ma nwee ndị ọrụ IT ha chọpụta ihe kpatara eji ajụ ozi ịntanetị.
Ghọta na enwere ntụgharị ntụgharị na B2B na nsogbu siri ike nke enweghị ike idozi. Nọgide na-ezipụ ma na-anọgidesi ike mgbe nsogbu dị.